crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Lakulan: Ninka musmaarrada ka xaaqa jidadka | HimiloNetwork
Lakulan: Ninka musmaarrada ka xaaqa jidadka
Posted by: Zakariya in Wararka January 16, 2017	0 181 Views
Bangalore (Himilonews) – Jebakumar waa nin yool ku socda. Taniyo sanadkii 2012, wuxuu go’aansaday in waqtigiisa nasiinada uu jidka weyn ee magaalada Bangalore ee dalka Hindiya ka xaaqo musmaarro ay soo dhigaan goomiistayaal si kas ah ugu soo daadiya – iyaga oo raba inay lacag ka sameeyaan dayac-tirka lugaha baabuurta. Shantii sano ee ugu danbeysay, Kumar wuxuu sheegtay inuu jidadka ka xaaqay in ku dhow 50 kilogaram oo musmaarro ah.
Waxay howshiisu bilaabatay markii uu xaqiiqsaday in gaarigu ka banjaro markasta oo uu ku socdaalo jidka weyn ee magaalada ee u dhaxeeya guriga iyo goobtiisa shaqo. Hayeeshe markii uu ogaaday in banjarka taayarada ay sabab u yihiin mudmudka musmaarrada, waa goortii uu sidoo kale hubsaday inay tahay ujeeddo ka danbeysa lacag in laga sameeyo dhibaatadooda.
Tallaabtiisii koobaad ayaa noqotay inuu dacwad ka geeyo laamaha booliska iyo nabad-gelyada. Wuuse ku gacan-seyray. Waana taas markii uu tallaabta xigta ka dhigtay inuu isagu u sara kaco gurbinta iyo ururinta musaamiirta lagu soo daadiyo jidadka.
Previous: Ol’ole lagu baahinayo fahamka diinta Islaamka oo ka socda Kanada
Next: Haweeney 8 sano ku dhex nool gegi dayuuradeed
Maalinta Caalamiga ‘Braille-ka’ ee Farta Indhoolayaasha.
Haweeney gudaafad ka dhex heshay lacag dhan $180,000
Soon iyo Samafal: Muslimiinta Blackburn oo Nadaafadda ka shaqeynaya.
Hooyo isku dishay si wiilkeeda oo buka u helo hannaanka caymiska –kadibna uu qarashka isbitaalka iskaga baxsho!